LibreOffice 6.0 inodarika miriyoni imwe kurodha pasi | Linux Vakapindwa muropa
Iyo Gwaro Foundation yakazivisa kuti svondo rapfuura LibreOffice 6.0, yemahara uye multiplatform hofisi suite, ine rakapfuura iro rakakosha chinangwa che 1 miriyoni kurodha pasi kubvira payakatangwa muna Ndira 31, 2018.
Idzi inhau dzakanaka kwazvo kune iyo Yemahara uye Yakavhurika-Sosi software nharaunda uye, chokwadika, chinangwa chakakura cheLibreOffice icho chiri kukunda zvishoma nezvishoma kurwisa software senge Microsoft Office.
LibreOffice yakapfuura miriyoni kurodha pasi mavhiki maviri chete mushure mekuburitswa kweshanduro 6.0, yekupedzisira nyowani yekuvandudza iyo yakaunza akawanda maficha uye kugadzirisa pamusoro peiyo yapfuura vhezheni.
LibreOffice 6.0 yaisanganisira dhizaini shanduko, ma gradients matsva, mataera tafura, maikoni, akavandudzwa mabhawa anotenderera uye nezvimwe zvakawanda zvaunogona kutarisa mukati kuongorora kwedu.
Kupfuura miriyoni kurodha pasi kweLibreOffice 6.0
Vhiki rapfuura, Iyo Gwaro Sisekelo yakaburitsa yekutanga kugadziridza kugadzirisa kweLibreOffice 6.0 kuvandudza chengetedzo uye mashandiro echishandiso pamapuratifomu ese.
LibreOffice 6.0.1 Iyo ndiyo vhezheni inowanikwa zvakanyanya kurodha pasi, asi sangano richaramba richivandudza software yayo mumavhiki anotevera, saka izvi zvinogona kuchinja nekukurumidza.
Izvo zvinogara zvichigadziridzwa kubva mushanduro pamberi pa6.0 yave poindi yakakosha yekutorwa kweLibreOffice uye kusiiwa kweMicrosoft Office nevanhu vazhinji uye vazhinji.
Muhurukuro naMike Saunders, Marketing Manager kuThe Document Foundation, zvakasimbiswa kuti kusvika ipapo (nezuro mangwanani), vhezheni 6.0 yeLibreOffice aive nekutora 1,176,317Ehezve, nhamba iyi yawedzera uye tinogona kukurumidza kuzivisa chinangwa chitsva chaitika.
Muhurukuro imwecheteyo, zvakasimbiswawo kuti vhezheni 6.0.2 iri mumabasa uye ichazoburitswa imwe nguva mumwedzi mishoma inotevera.
Kana iwe uchida dhawunirodha uye gadza LibreOffice paLinux, Windows kana Mac unogona kuzviita kubva kwedu yepamutemo dzidziso yeLinux kana kushanyira iyo Suite yepamutemo peji.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » LibreOffice 6.0 inodarika miriyoni imwe kurodha pasi